Indawo yogcino lwedatha ayinakuvulwa kuba iProjekthi yeVBA equlethwe kuyo ayinakufundwa
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Indawo yogcino lwedatha ayinakuvulwa kuba iProjekthi yeVBA equlethwe kuyo ayinakufundwa
Ulwazi oluneenkcukacha malunga ne "Indawo yogcino lwedatha ayinakuvulwa kuba iProjekthi yeVba equlathwe kuyo ayinako ukufundwa" Impazamo
Xa usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula ifayile yedatha yokuFikelela eyonakeleyo, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo (impazamo 53) kuqala:
Qaphela isihloko somyalezo wempazamo "yiMicrosoft Visual Basic yesicelo", ke kubonakala ngathi impazamo ibangelwa kukuba ifayile yeVBA ayifumaneki.
Cofa iqhosha u "Kulungile", uza kufumana umyalezo wemposiso olandelayo (impazamo 29081):
Isiseko sedatha asinakuvulwa kuba iprojekthi yeVBA ekuyo ayinakufundeka. Isiseko sedatha sinokuvulwa kuphela ukuba iprojekthi yeVBA icinyiwe kuqala. Ukucima iprojekthi yeVBA kususa yonke ikhowudi kwiimodyuli, iifom kunye neengxelo. Kuya kufuneka ugcine isiseko sedatha yakho ngaphambi kokuzama ukuvula isiseko sedatha kwaye ucime iprojekthi ye-VBA.
Ukwenza ikopi yogcino, cofa kuRhoxisa kwaye emva koko wenze ikopi yogcino lwedatha yakho. Ukuvula isiseko sedatha kunye nokucima iprojekthi ye-VBA ngaphandle kokwenza ikopi yogcino, cofa Kulungile.
Iprojekthi yeZiseko eziBonakalayo zeZicelo kwiziko ledatha lonakele.
Ukuba uqhubeka ngokunqakraza "Kulungile" iqhosha ukuvumela ukufikelela kuvule isiseko sedatha kwaye ucime iprojekthi ye-VBA, uya kufumana umyalezo wesithathu wemposiso (impazamo 29072), njengasezantsi:
Ukufikelela kweMicrosoft kufumene urhwaphilizo kule fayile. Ukuzama ukulungisa urhwaphilizo, qala ngokwenza ikopi yogcino lwefayile. Cofa kwiThebhu yefayile, yalathe kuLawulo kwaye ucofe indawo eKhompakthi kunye noLungiso lweDatha. Ukuba kungoku uzama ukulungisa le nkohlakalo, kufuneka uphinde wenze le fayile okanye uyibuyisele kugcino lwangaphambili.
Oko kuthetha ukuba iMicrosoft Access ayinakuvula indawo yogcino lwedatha.
Isiseko sedatha sokuFikelela kwezempilo asinazo kwaphela iiprojekthi ze-VBA. Nangona kunjalo, ngenxa yorhwaphilizo, ukuFikelela kuya kuthathela ingqalelo ifayile yedatha eyonakeleyo iqulethe iiprojekthi ze-VBA kwaye izame ukuyivula. Emva kokusilela ukuvula ifayile, iya kubonisa le miyalezo yempazamo ingentla, edidayo kuba ifayile yoqobo ayinazo naziphi na iiprojekthi ze-VBA konke konke.
Esona sisombululo kukusebenzisa imveliso yethu DataNumen Access Repair ukulungisa ifayile ye-MDB nokusombulula le mpazamo.
Isampulu ifayile ye-MDB eyonakeleyo eya kuthi ibangele impazamo. mfayile_7
Ifayile ilungiswe nge DataNumen Access Repair: mydb_7_ zilungiswe.mdb